A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ - Most Recent
Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / P - PhayarShidKhoe - ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုး မဟာနမက္ကာရ...
အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ ရေးသား ပူဇော်ခဲ့သော သမိုင်းဝင် မဟာနမက္ကာရ ဘုရားရှိုခိုး ဖြစ်သည်။ ထိုနမက္ကာဘုရားခိုရှိး...
Tags: မဟာနမက္ကာရ ဘုရားရှိခိုး(နိဒါန်း၊ပါဠိ၊အနက်) News - သတင်းများ Aung San Sayadaw’s 2012...
Aung San Sayadaw’s 2012 schedule in United States and Canada
Tags: Aung San Sayadaw’s 2012 schedule in United States and Canada A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Dhammarekkhita Ordination...
Posted By: Khin8oo
Traditionally one of the responsibilities
of the Buddhist parents is to
ordain their children u novices, nuns,
and monks at least forashort period of
us at Dhammarekkhita Monastery during
the ceremony to ordain novices, nuns,
and monks .As a...
Tags: invitation ordination ceremony monks novice nuns fort wayne indiana Aung San Sayadaw Dhamma Talk M - Mogok sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ် / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပဋိစ္စသမုပ...
Tags: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာတော် (၂) mogok ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မိုးကုတ်ဆရာတော် မိုးကုတ် mogoksayardaw mogok sayardaw sayartaw M - Mogok sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ် / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပဋိစ္စသမုပ...
Tags: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာတော် (၁) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မိုးကုတ်ဆရာတော် မိုးကုတ် mogoksayardaw mogok sayardaw sayartaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - U ThuMinGaLa - ဥူးသုမင်္ဂလ ဒယ်အိုးဆရာတော် ဆရာတော်ကြ...
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ, သီတဂူဆရာတော်, ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ, အောင်ဆန်းဆရာတော်,သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Maha Parittas by Aung San...
Tags: AungSan Sayardaw payate payatekyee payatekyi payatekyee A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] နိဗ္ဗာန်ဖေ...
ဘဒ္ဓ န္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ(အောင်ဆန်းဆရာတော်) - နိဗ္ဗာန်ဖော်ညွှန်းရေစက်သွန်းတရားတော်
Tags: အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္ထိသာရ - Aungsan sayartaw aungsansayardaw batdantakatehtetharya batdanta_katehtetharya katehtethara katehtesara A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အလှူမတတ်ဒ...
ဘဒ္ဓ န္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ(အောင်ဆန်းဆရာတော်) - အလှူမတတ်ဒုက္ခထပ်ကံ(၄)မျိုးတရားတော်
Tags: အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္ထိသာရ - Aungsan sayartaw aungsansayardaw batdantakatehtetharya batdanta_katehtetharya katehtethara katehtesara A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဥာဏ်ရွက်လ...
ဘဒ္ဓ န္တသဒ္ဒမ္မကိတ္တိသာရ(အောင်ဆန်းဆရာတော်) - ဥာဏ်ရွက်လွှင့်ပြီးသမာဓိယဉ်ကိုစီးတရားတော်
Tags: အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္ထိသာရ - Aungsan sayartaw aungsansayardaw batdantakatehtetharya batdanta_katehtetharya katehtethara katehtesara Pages: 123 of 3